Shiinaha 15Khz 2600w Awoodda Sare ee Ultrasonic Alxanka Oscillator oo leh Soosaarka Waxsoosaarka Booster iyo Warshad | Qianrong
15Khz 2600w Awood Sare Ultrasonic Alxanka Oscillator oo leh Boostada Birta ah
Joogtaynta 15 khz
Awoodda wax soo saarka 2600 watt
Qalabka wadajirka ah M16 * 1
Ballaca dhoobada dhoobada 60mm
Qty cajaladaha dhoobada 4pcs
Codsiga Mashiinka alxanka caaga ah
Xiisaha 'Oscillator' waxaa sidoo kale loo yaqaan 'gariiriye'. Dhamaan warshadaha waxay kuxiran yihiin hoonka geeskana waxaa looyaqaanaa gariiriye. Qalabka gariirka 'ultrasonic vibrator' waa aalad badaleysa tamarta korantada iyo tamarta farsamada (gariirka acoustic) iyadoo ay saameyn ku yeelaneyso piezoelectric ee dhoobada loo yaqaan 'piezoelectric ceramics', waxayna kordhisaa xirmooyinka daboolka shucaaca hore iyo gadaal iyadoo la adeegsanayo iswaafajinta acoustic impedance.
Qalabka gariirka 'ultrasonic vibrator' wuxuu ka kooban yahay transducer ultrasonic iyo geeska ultrasonic. Ultrasonic transducer waa qalab u rogi kara tamarta korantada kuleylka badan tamar farsamo. Geeska Ultrasonic waa aalad dadban oo aan abuurin gariir. Kaliya waxay bedeshaa baaxadda qiyaasta gariirka ee ka imaaneysa transducer-ka ultrasonic ka dibna u gudbineysa. Isbedelka impedance.
Sidee loo doortaa mashiinka alxanka caaga ah ee ultrasonic leh 20khz iyo 15khz frequency?
Mowjadaha ugu caansan ee mashiinnada alxanka ultrasonic waa 15khz iyo 20khz mashiinnada alxanka caagga ah. Markasta oo ay sare u kacdo isugeynta ultrasonic, ayaa ka sii fiicnaanta saxnaanta alxanka, laakiin marka loo fiiriyo awoodda qaraabada ah, waa yaraanta qiyaasta Waxyaabaha soo socda ayaa qeexaya farqiga u dhexeeya mashiinka alxanka ultrasonic 15khz iyo 20khz:
Markay xaddiga ultrasonic-ka uu hooseeyo, buuq ayaa soo baxa. Marka soo noqnoqoshada ay ka hooseyso 20 khz, buuqa ayaa noqda mid aad u ballaaran inta lagu jiro alxanka ultrasonic. Alaabada balaastigga ah ee leh saxsanaanta alxamadeed ee sare, inta jeer ee sii badanaysa, ayaa ka sii wanaagsan. Sidaa darteed, mashiinka alxanka ultrasonic ee 20khz ama ka sareeya wuxuu ku haboon yahay saxnaanta, khafiifka ah, qaybo caag ah oo aad u jajaban, sida kaarka SD, ama alaabooyinka leh kareem gudaha sheyga; 15khz mashiinka alxanka ultrasonic ayaa ka fudud in la weyneeyo oo leh baaxad weyn. Waxay ku habboon tahay alxanka alaabada waaweyn ee adag, alxanka adag, alaabada caagga ah oo aad u xun;
Marka labaad, cabbirka caaryada ee 15khz iyo 20khz sidoo kale waa kuwo aan iswaafaqsaneyn. Dhererka caagagga ultrasonic ee 15khz guud ahaan waa qiyaas ahaan 17cm dherer, halka 20khz caaryada ultrasonic ay ku saabsan tahay 12.5cm dheer.
Mar labaad, mashiinka alxanka balaastigga ah ee 15khz wuxuu xiijin karaa shaqooyin waaweyn, xoogana waxaa loo qaybin karaa 2600w / 3200w / 4200w. Mashiinka alxanka balaastigga ah ee 20khz waa 900W - 2000w, awoodiisu way yar tahay, cabirka alaabada laxiriirana waa yar yahay.
Hore: Advanced 20Khz 3300w Ultrasonic Alxanka Beddelidda CJ20 Transducer leh Birta Dusha Dibadda
Xiga: 20Khz 1500w Ultrasonic Welding Transducer oo leh Nidaamka gariirka birta birta